नेपाली फुटबलमा एउटा यस्तो ‘फिक्सिङ’ - १०२ गोलको त्यो खेल
ऋग्वेद शर्मा मंगलबार, वैशाख २३, २०७७, १३:२८
काठमाडौं- फुटबलमा एक खेलमा कतिसम्म गोल सामान्य लाग्ला? सन् २०१४ को विश्वकपमा ब्राजिल जर्मनीसँग ७-१ ले हार्दा अति ठूलो अन्तरको हार लागिरहेको अहिलेको पुस्तालाई एकै खेलमा एक सयभन्दा बढी गोल भएको सुन्दा कस्तो लाग्ला? त्यो पनि नेपाली लिग फुटबलमा नै।
कुरा २०३३ सालको सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको हो। त्यो बेला रानीपोखरी कर्नर टिम (आरसिटी) र अन्नपूर्ण क्लबबीचको खेल १०१-१ गोलको अन्तरमा सकिएको थियो। नेपाली फुटबलमा मात्र होइन विश्व फुटबलकै इतिहासमा यो दुर्लभ खेल हो। यस्तो खेल हुन मैदानको परिस्थितिले मात्र सम्भव हुँदै हुँदैन। त्यसअघिका अरु पाटाहरु अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छन्।
हुन त विश्व फुटबलमा आधिकारिक खेलहरुमा नै धेरै गोल हानेर नौलो इतिहास रचिएका खेलहरु निकै छन्।
अमेरिकाकै शासनमा रहेको समुद्री टापु देश अमेरिकी सामोआ र अस्ट्रेलियाविरुद्ध २००२ को विश्वकप छनोट खेलमा अस्ट्रेलियाले ३१-० ले खेल जितेको थियो। त्यसबाहेक पनि २०१५ मा ओलम्पिक छनोट अन्तर्गत फिजी र माइक्रोनेसियाबीचको ३८-० को खेल, भानुआटुले माइक्रोनेसियाविरुद्ध नै निकालेको ४६-० को जित, नाइजेरियामा पुलिस मसिन र बुलावायोबीच ६७-० को खेल, प्लाटेउ युनाइटेड र अकुर्बाबीच ७९-० को खेल जस्ता नतिजाहरु भएकै देखिन्छन्।
तर एक सयभन्दा बढी गोलको खेल इतिहास भने सामान्यतः देखिँदैन। विश्व फुटबल इतिहासमा आधिकारिक खेलमा आरसिटी र अन्नपूर्ण क्लबबीचको १०१-१ को हारभन्दा ठूलो अन्तर मादागास्करको लिगमा सन् २००२ को अक्टोवरमा भएको देखिन्छ। जसमा एएस एडेमा र एसओइबीच भएको खेल १४९-० मा टुंगिएको थियो। जसले सन् १९८५ मा स्कटिस कपमा बनेको एर्बोथ र बोर्न एकोर्डबीचको ३६-० गोलको विश्व कीर्तिमान तोडिएको थियो।
मादागास्करमा एएस एडेमा र एसओइबीच भएको १४९-० को नतिजा र नेपाली फुटबलमा आरसिटी र अन्नपूर्णबीच भएको १०१-१ को नतिजामा एउटा समानता देखिन्छ, खेलमार्फत भएको विरोधको स्वर।
एएस एडेमा र एसओइबीच भएको १४९-० को नतिजामा रेफ्रिविरुद्ध विरोधको स्वर थियो। जसमा सबै गोल एसओइले आत्मघाती हानेको थियो। तर नेपाली फुटबलमा देखिएको १०१-१ को नतिजा विरोधकै शैली भए पनि त्यो आत्मघाती रुपमा गरिएका गोल थिएनन्। विपक्षी टिमका खेलाडीले गरेकै गोल थियो, अन्नपूर्णविरुद्ध आरसिटीले।
नेपाली फुटबलको त्यो खेल सहिद स्मारक लिगको इतिहास बनाउन पनि महत्वपूर्ण खेल हो। नेपाली लिग फुटबलमा एकै खेलमा १०२ गोल हुनु सामान्य नतिजा होइन। जब कि गएको ए डिभिजन लिगभरिमा नै २१० गोल भएको थियो।
त्यो खेलसँगै प्रजातन्त्रवादीले तत्कालिन व्यवस्थाप्रति गरेको व्यङ्ग्य पनि थियो। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाका नराम्रा कामलाई खेलमार्फत विरोध गरिएको तत्कालीन समयका जानकार बताउँछन्।
अहिले अन्नपूर्ण क्लबको अस्तित्वसमेत देखिँदैन भने आरसिटी क्लब बी डिभिजन लिगमा संघर्ष गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण रोकिएको बी डिभिजनमा संघर्ष गर्नुपर्ने जस्तो इतिहास आरसिटीको हुँदै होइन।
बिस २०२४ सालमा पहिलोपटक ‘बी’ डिभिजनबाट आधिकारिक फुटबल यात्रा सुरु गरेको आरसिटी २०२५ सालमा नै ‘ए’ डिभिजनमा उक्लिएको थियो। जसबाट बिस १९८९ सालमा स्थापना भएको आरसिटीले नयाँ उचाइ पायो।
६ पटक ‘ए’ डिभिजन लिगको विजेता टिम आरसिटीकै सफलता र बढ्दै गएको खेलाडी संख्याले पहिलो रोजाइँको टिममा स्थान बनाउन राम्रै दरिएका खेलाडीलाई पनि हम्मे पर्थ्यो। त्यसले अन्नपूर्ण क्लबका रुपमा आरसिटीकै दोस्रो टिमसमेत नेपाली फुटबलमा देखापरेको थियो।
आरसिटी र अन्नपूर्णसँगै सुपर आरसिटी टिम समेत बनाएर फुटबलमा लागिरहेको क्लबका लागि मैदानबाहिरको गम्भीर खेला स्वीकारयोग्य थिएन। त्यसैले रचियो १०१ गोलको योजना।
यसलाई त्यो समयका फुटबल पारखीहरु रोमाञ्चित भएर सम्झिने गर्छन्। तर नयाँ पुस्ताका लागि भने यो विश्वास गर्नसमेत गाह्रो कथा जस्तो हुनसक्छ। त्यो खेलसँगै प्रजातन्त्रवादीले तत्कालिन व्यवस्थाप्रति गरेको व्यङ्ग्य पनि थियो। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाका नराम्रा कामलाई खेलमार्फत विरोध गरिएको तत्कालीन समयका जानकार बताउँछन्।
एक सय एक गोलको आधार भने मैदानबाहिरको राजनीतिले तय गरेको थियो। त्यो समय नेपाली फुटलबमा उत्कृष्ट रहेको आरसिटी र अन्नपूर्ण क्लबलाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी विरोधीहरुले काम गरिरहेका थिए। आरसिटीलाई राणशासनविरुद्ध जनताको क्लबका रुपमा समेत हेरिएको थियो। त्यसैले पञ्चायती शासक सकेसम्म आरसिटीलाई बन्द नै गराउने सोचमा लागिरहेका थिए।
अरु विपक्षीलाई फाइदा पुग्नेगरी गरिएका कामको विरोधस्वरुप पनि आरसिटी र अन्नपूर्णले १०१-१ गोलको खेल खेलेका थिए। त्यो समयमा नेपाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था र त्यसका प्रमुखसमेतले खुलेर आरसिटी र अन्नपूर्णको विरोध गरेका थिए।
त्यो दिन काठमाडौंमा पूरा अभिरल वर्षा भइरहेको थियो। दशरथ रंगशाला समेत हिलाम्य थियो। खेलकै दौरान पनि निरन्तर पानी परिरहकै थियो। रोचक त के भने दुवै टिमका पनि एकाध खेलाडीलाई छाडेर बाँकीलाई नतिजा सोचेर नै खेलिएको छ भन्ने थाहा थिएन। ठूलो गोलको कथा बुनेका थिए, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ र विष्णुगोपाल श्रेष्ठले। उनीहरुले उक्त योजना खेलको अघिल्लो दिन भक्तवीर तुलाधरको घरमा रचेका थिए।
खेल यसरी मिलेमतोमा अगाडि बढिरहेको थियो कि आजित रेफ्रीले १० मिनेट अगावै खेल सकिएको घोषणा गरिदिएका थिए। खेलमा अधिकांश गोलहरु दोस्रो हाफको ३५ मिनेटमा भएका थिए। राम्ररी विचार गर्ने हो भने त पछिल्लो हाफको अन्ततिर त प्रत्येक एक मिनेटमा चार गोलसम्म भइरहेका थिए।
खेलको पूर्वाद्ध प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नै देखिएको थियो। सुरुवाती ३० गोलसम्म त खेलमा सय भन्दा बढी गोल हुने अनुमान दर्शकलाई पनि थिएन। खेलका रेफ्री थिए शिवकुमार थापा। लाइन्समेनमा थिए शिव सिंह र रामेश्वर राउत।
खेल यसरी मिलेमतोमा अगाडि बढिरहेको थियो कि आजित रेफ्रीले १० मिनेट अगावै खेल सकिएको घोषणा गरिदिएका थिए। खेलमा अधिकांश गोलहरु दोस्रो हाफको ३५ मिनेटमा भएका थिए। राम्ररी विचार गर्ने हो भने त पछिल्लो हाफको अन्ततिर त प्रत्येक एक मिनेटमा चार गोलसम्म भइरहेका थिए। त्यो १ सय १ गोलको खेलमा आरसिटीका लागि गोल गर्न बाँकी खेलाडी कोही पनि थिएनन्।
अर्को अचम्म त के भने सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी नै गोलरक्षकको भूमिकामा रहेका विष्णुगोपाल श्रेष्ठ थिए। आरसिटीले प्रत्येक गोलपछि मैदानको बीचबाट बल चल्नेवित्तिकै सिधै पोस्टमा लगेर गोल गरिहाल्थ्यो। अन्नपूर्णका खेलाडी पोस्टको वरपर बसेर बल रोक्ने प्रयाससमेत नगरी हेरिरहेका हुन्थे। र खेल सकिएपछि रेफ्री अफिसियल टिमले खेलमा कुनै मिलेमतो नभएको रिपोर्ट दिएको थियो। हुन पनि त्यो मिलेमतो भन्दा बढी त आरसिटी र अन्नपूर्णको विरोधको स्वर थियो।
१०१ गोलको त्यही रोचक कथा सुन्दै आफ्नो फुटबलमा हुर्किएका अघिल्लो पुस्ताका खेलाडी गणेश थापा पनि त्यो असम्भव सुनिने खेलबारे सुनेदेखि नै अचम्म मानिरहेका छन्। ‘त्यो कुरा मैले पनि सुनेको नै हो। तर अघिल्लो पुस्ताले भनेअनुसार त्यो भएकै कुरा हो। सेन्टरबाट बल चलाएर सिधै पोस्टमा हानेको होला न त्र सामान्य खेलले लगातार गोल गरे पनि १०१ गोल त असम्भव नै लाग्छ’ उनले सुनाए।
गणेश थापाभन्दा अघिका नेपाली फुटबल पुस्ताका एक खेलाडी कोमल पाण्डे पनि अहिले रोमाञ्चक लाग्ने १०१ गोलको खेल सम्झन्छन्।
‘त्यो खेलमा सामान्य ढंगले गोल भएको भन्दा पनि एउटा विरोधको शैली थियो। त्यो समय कमल थापाहरु एन्फामा थिए। आरसिटी ब्यवस्थापनसँग एन्फाको सम्बन्ध राम्रो थिएन। त्यही बखतमा शासनप्रतिको विरोधमा आरसिटीले त्यो खेल रचेको थियो’, कोमल सुनाउँछन्, ‘बल सेन्टरमा चलाएर छाडिदिने र पोस्टमा हान्ने गरिरहेका थिए। जब दर्शकले त्यो खेलको अन्तर्य बुझे तब केही निराश पनि देखिन्थे।’
नेपाली फुटबलका यस्ता रोचक पक्षहरु अरु निकै रहे पनि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) जस्ता आधिकारिक संस्थाले तथ्य, तथ्यांक राख्ने र इतिहास जोगाउने काम नगरेकोमा पनि कोमल चिन्ता व्यक्त गर्छन्।